Casharkaan, waxaan ku arki doonnaa waxyaabo ay ka mid yihiin walxaha iskuulka Jarmalka, waxyaabaha fasalka Jarmalka, barashada magacyada Jarmalka ee walxaha iyo aaladaha waxbarasho ee loo isticmaalo iskuulka, fasalka, casharada, asxaabta qaaliga ah.
Aynu marka hore baranno aaladaha loo adeegsaday iskuulka Jarmalka, taas oo ah, qalabka dugsiga, oo ay qormooyinkooda mid mid ula galaan sawirro Sawirradan si taxaddar leh ayaa laguuu diyaariyey. Ka dib, mar labaad iyadoo la raacayo weheliye muuqaal ah, waxaan baran doonnaa labada hanti-wadaag iyo jamacyada alaabooyinka iskuulka Jarmalka oo ay weheliyaan qodobadooda. Kadib waxaan kuu soo bandhigi doonaa waxyaabaha iskuulka Jarmal ka kooban ee liiska ku jira. Sidan oo kale, waxaad si fiican ugu baran doontaa qalabka waxbarashada Jarmalka iyo tababarka. Sidoo kale xagga hoose ee bogga waxaa ku yaal weedho muunad ah oo ku saabsan alaabta dugsiga oo af Jarmal ah.
Shayga Dugsiyada Jarmalka Muujinta Sawirka
die Schultashe - Boorsada iskuulka
der Bleistift - qalin
der Kuli - Qalinkii Ballpoint
der Füller - Qalinkii isha
der Farbstift -B sumadeeye rinji
Calaamadeeyaha - Muujiye
der Mappchen - Kiis qalin
das Buch - Buug
das Heft - Buug Xusuusin
der Malkasten - Biyo-biyood
der Pinsel - Burush
das Wörterbuch - Qaamuus
das Lineal - Xukun
der Winkelmesser - Qandaraasle
dhin Tafel - Sabuuradda
dhinto Kreide - nuurad
die Schere - Maqas
die Land Rahmat - Khariidad
der Tisch - Miis
der Stuhl - Darajo
das Klebeband - Cajalad
Ardayda qaaliga ah, waxaan aragnay waxyaalaha iskuulka ugu isticmaalka badan uguna soo noqnoqda Jarmalka oo ay weheliyaan qodobadooda. Kuwani waa walxaha ugu caansan ee Jarmalka ee maskaxda ku soo dhaca fasalka iyo casharrada. Hadda, aan ku aragno alaabada iskuulka Jarmalka dhowr sawir. Hoos waxaad ka arki doontaa walxaha iskuulka Jarmalka, labadaba qoraalkooda iyo jamacyadooda. Sidaad ogtahay, qodobbada dhammaan magacyada jamac ee Jarmalku waa dhintaan. Maqaallada magacyo keli ah ayaa u baahan in la xafido.
Waxyaabaha Iskuulka Jarmalku ku badan yahay
Hoos waxaa ku qoran Jarmalka si loogu isticmaalo qaar ka mid ah waxyaabaha iskuulka loo isticmaalo iyo ereyada la xiriira iskuulka qaarkood. Sawirro ayaynu diyaarinay. Sawirada hoose, iskuulka Jarmalka iyo walxaha fasalka waxaa lagu siiyaa maqaallada iyo jamacyadooda. Fadlan si taxaddar leh u baar. Hoos ka hoose sawirrada hoose, waxaa ku jira liis ay ku qoran yihiin walxaha iskuulka Jarmalku ku qoran yahay qaab qoraal ah, ha iloobin inaad eegto liistadeena.
Qalabka dugsiga Jarmalka, Magacyada Jarmalka ee alaabooyinka fasalka
Qalabka Dugsiyada Jarmalka leh Aragtida iyo Qaybaha
Sawirka kore, waxaa ku yaalo Dugsi Jarmal iyo Qalab Fasal oo leh Mawduucyo iyo jamacyo
Liiska Alaabada Iskuulka Jarmalka
Soo booqde qaaliga ah, liiska alaabada iskuulada Jarmal ee hoos ku qoran waxaa soo diyaariyay xubin qiimo leh. Haddii aad la kulanto wax qalad ah, fadlan nala soo socodsii. Waxaan kuu rajeyneynaa inaad ku guuleysato waxbarashadaada Jarmalka.
Fasalka Dhimashada: fasalka
Das Klassenzimmer: fasalka
Das Lehrerzimmer: qolka macalimiinta
Bücherei u dhintay: Maktabadda
Das Shaqo: Sheybaarka
der Gang: Waddada
der Schulhof: beerta dugsiga
der Schulgarten: beerta dugsiga
Die Schulsachen: (Alaabta dugsiga)
der Lehrertisch: miiska macalinka
Das Klassenbuch: buugga fasalka
dhimasho Tafel: guddi
ku dhinta Kreide: jeeso
der Kugelschreiber (Kuli): qalimaan buuxa
Daas Heft: buug
geerida Schultasche: Bacda iskuulka
der Füller: qalinka laga galo
Das Wörterbuch: qaamuuska
dhimasho Mappe: faylka
der Bleistift: qalin-qori
Das Mäppchen: sanduuqa qalinka
geerida Scheer: maqas
der Spitzer: qalin qori
Das buch: buug
dhimasho Brille: muraayado
der Buntstift / Farbstift: dareemay qalin
Das Xisaabiye: taliye
Dhimasho dhoobo: bacda cuntada
Das Blatt-Papier: warqad
dhimasho Patrone: kartridge
Block Block: block ma aha
Das Klebant: cajalad cireedka
u dhintee Landkarte: khariidada
der Pinsel: burush ranjiga
der Malkasten: sanduuq rinji ah
Dhimasho Tigreega: jidka hoose
Jumladaha Muunada Qalabka Iskuulka Jarmalka
Hadda aan tusaale u soo qaadanno jumladaha ku saabsan alaabta dugsiga oo af Jarmal ah.
Was isas das? (Waa maxay waxaan?)
Das ist ein Radiergummi. (Kani waa masixi)
Miyuu ahaa das das? (Waa maxay kuwanu?)
Das sind Bleistifte. (Kuwani waa qalimaan.)
Hast du eine Schere? (Ma leedahay maqas?)
Ja, ich habe eine Schere. (Haa, waxaan leeyahay maqas)
Nein, ich habe keine Schere. (Maya, ma haysto maqas)
Casharkaan, waxaan ku soo bandhignay liis kooban oo ah aaladaha iyo qalabka loo adeegsado iskuulka, ee loogu isticmaalo fasalka, dabcan, liiska qalabka loo adeegsado iskuulka kuma koobna tan, laakiin waxaan siinay liiska Jarmalka. qalabka ugu isticmaalka badan, waxaad ka heli kartaa magacyada qalabka aan halkan ku jirin adoo baaraya qaamuuska.
Waxaan kuu rajeyneynaa dhammaan guulahaaga casharka Jarmalka.
Tags: Qalabka dugsiga Jarmalka ee fasalka 10aad, Qalabka dugsiga Jarmalka ee fasalka 9aad, Gaadiidka dugsiga ee german, sahayda dugsiga, sahayda fasalka ee alman, sahayda dugsiga, sahayda dugsiga